Killer Mac n Cheese nguJamie Oliver - Macaroni kunye neCheese Recipe - Ukupheka + Iincwadi Zokupheka
Killer Mac n Cheese nguJamie Oliver - Macaroni kunye neCheese Recipe
Ityuwa yolwandle kunye nepepile emnyama entsha
Iipuniwe ezi-3 zebhotela
3 yokufumba amacephe umgubo wokutya wonke
iindlela ezingabizi kakhulu zokuhombisa iindonga
Iigrafu eziyi-10 zegalikhi, ezixutywe zacolwa zacolwa
6 amagqabi amatsha e-bay
Ikota enye yobisi olunamafutha ancitshisiweyo (2%) ubisi
Iikomityi ezine ingqiniba zemacaroni
1 & frac12; iikomityi zigalelwe itshizi yeCheddar
1 indebe entsha itshizi yeParmesan
I-sprigs ezimbalwa ze-thyme entsha, amagqabi akhethiweyo
Indlu ye-hgtv ejikelezayo ibonisa
Ukuqhekeka kwesosi seWorcestershire, njengeLea kunye nePerrins (ukhetho)
Isefu se nutmeg (uyazikhethela)
Izandla ezinkulu ezi-3 zesonka esitsha
1.Fumana ipani enkulu yamanzi anetyiwa ekubiliseni. Nyibilikisa ibhotolo epanini enkulu ye-ovenproof, okanye i-oveni yaseDatshi, ngaphezulu kobushushu obuphantsi, emva koko wongeze umgubo kwaye ujike ubushushu bube phakathi, uvuselele lonke ixesha, de ufumane unobumba- le yi-roux yakho. Yongeza yonke igalikhi esisikiweyo- ungakhathazeki malunga nesixa, kuba isilayi ngasinye siya kuba caramelize njenge toffee kwi roux. Qhubeka upheka kwaye uvuselele kude kube yigolide kwaye igalikhi intle kwaye incangathi. Yongeza amagqabi e-bay kwaye ucofe ubisi kancinci ngexesha ukuqinisekisa ukuba ufumana isosi emnandi, egudileyo. Yizisa umxube ekubiliseni, uze ushiye emlilweni omncinci ukuze udibanise kwaye uphawule, uvuselele ngamanye amaxesha. Ukucwilisa i-oven yakho ukuya kuma-425 degrees.
2. Yongeza ipasta epanini enamanzi abilayo anetyuwa kwaye upheke ngokulandela imiyalelo yephakheji. Okwangoku, sika iitumato ebhodini kwaye uzonge kakuhle ngetyuwa nepepile. Ukucoca ipasta kwaye uyongeze kwangoko kwisosi. Nika isikhuthazo esihle kwaye uthathe ipani kubushushu. Faka itshizi yakho egreyitiweyo, iitumato ezinqunqiweyo, kunye namanye amagqabi eethyme. Isosi encinci yaseWorcestershire yongezwe ngoku intle; kunjalo ke nothango oluncinci okanye ezimbini ze nutmeg. Ngoku sebenza kwi-flavour-nambitha kunye nexesha lonyaka de ibethe indawo elungileyo. Ufuna ukuba manzi kancinci kuba iya kuphinda ikhuphe kwi-oveni, ke yongeza amanzi xa kufuneka njalo.
3. Ukuba wenze isosi yakho kwihovini yaseDatshi, shiya yonke into apho; ukuba akunjalo, yidlulisele kwisitya sodongwe esinzulu. Bhaka imizuzu engama-30 ehovini, de kube yigolide, ibhabhu, icrispy, kwaye imnandi.
4. Ngelixa uphekayo, beka iimvuthuluka zezonka zakho kunye ne-thyme eseleyo ngepani yokuqhotsa kunye neerubles ezimbalwa zeoyile yomlilo kubushushu obuphakathi. Gxotha kwaye uphonsa iimvuthu ezijikeleze kude kube yinto enqabileyo negolide yonke. Susa ekushiseni kwaye uphuze kwisitya esihle. Ncedisa i-macaroni kunye noshizi embindini wetafile, kunye nesitya sakho seemvuthuluka zesonka zokufefa ngaphezulu, kunye nesaladi entle eluhlaza.
Iingcebiso zewayini: IPinot Grigio elungileyo okanye enye imhlophe eyomileyo yase-Italiya.
intengiso yentakumba kufutshane nam namhlanje
Ukusuka AMAMERICA KAJAMIE NguJamie Oliver. © Jamie Oliver, 2009, 2010. Iifoto © David Loftus, 2009, 2010. Ipapashwe nguHyperion
umbulelo wokuqala ubhiyozelwa
ezintlanu kunye nedime yokugcina
itheyibhile encinci yasekhitshini